20 Mar, 2020 - 00:03	 2020-03-19T15:22:12+00:00 2020-03-20T00:03:02+00:00 0 Views
NDIRI murume ane makore 37. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Nhamba dzangu 0778 687 778.
Ndinotenda nechirongwa chino, ndakamuwana mukadzi kune avo vachiri kutumira masms panhamba idzi 0772 435 715 ngavamire zvavo.
Kwayedza makadii? Ndiri murume ane makore 33, ndotsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 35 akasununguka uye anotya Mwari. Handisi pamushonga, iye ngaave asiri pamushongawo. Ndinoenda kubasa, nhare yangu 0786 554 394.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi achigara muHarare ane makore 19 – 24. Andifarira anondibata pa0714 246 883.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana 1, ndotsvagawo murume ari pachokwadi ane rudo. Ngaave ari pamushonga. Nhare yangu 0776 393 545.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana wekuroora akanaka asingaratidzike kuti anorwara uye ngaave ari pamushonga. Ndinoda ane makore 18 kusvika 20, ngaave ari kwaMutare, Rusape kana Marondera. Andifarirawo ngaandibate pa0718 164 202.
Ndiri kuda mukadzi anoshanda. Ndinogeza, ndine 37 makore uye ndinoshanda muHarare. Nhare yangu 0717 878 250.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 20 – 25. Andifarira anondibata pa0776 215 149.
Ndotsvagawo mukadzi ane makore 19 zvichidzika. Ngaave mutsvuku akanaka uye ane zvivakashure zvinoyevedza. Ndinoda ane hunhu, nhamba dzangu 0776 095 675.
Makadii zvenyu? Ndiri mudzimai ane makore 22 nemwana 1. Ndinodawo murume anoda kuroora ari pamushonga, handidi anoda kutamba. Ngaave anotya Mwari, zvakawanda totaura. Andida ngaandibate pa0717 706 795.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana vaviri. Ndinotsvagawo murume ari kudawo zvemba. Handisi pamushonga, andifarirawo ngaandibate pa0778 119 788.
Ndiri murume ane makore 47 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvakawo mudzimai ari pamushongawo ane makore 35 kusvika 40. Nhare yangu 0715 538 875.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa uye ndotsvagawo mapenpals kubva pamakore 35 zvichikwira. Nhare yangu 0779 288 413.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 44, ndinotsvaga murume ane makore 50 kusvika 60. Ngaave ari pamushonga seni, ndoita basa remaoko uye ndoda ari pachokwadi. Zvakawanda tozotaura taonana, andifarira ndobatika panhamba dzinoti 0786 018 732.
Ndine makore 36, ndinodawo shamwarikadzi ine makore ari pasi peangu ane vana vasingadariki 2 uye anoshanda. Zvizhinji tozotaura, nhare yangu 0774 608 206.
Ndanzwa nekunyorera kuchirongwa chino asi tsamba yangu haisati yamboburitswa. Ndiri mudzimai ane makore 35, HIV positive uye ndinotsvagawo murume wekuwadzana naye ari positive. Nhare yangu 0719 753 761.
Makadini? Ndiri murume ane makore 33 nemwana 1. Ndinotsvagawo musikana ane chiso chakanaka anotya Mwari uye asinganwe doro, ndine business rangu. Ndiri chizvarwa chemuno asi ndine company yangu kuMozambique. Nhare dzangu idzo dzemuno 0779 508 729.
Ndiri kudawo musikana ari pachokwadi anoenda kuchechi ari HIV negative. Nhare yangu 0772 726 145.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 39 nevana 2, HIV negative uye ndodawo mukadzi anoda zvemba asiri pamushonga ane makore 19 kusvika 26. Handishande, ndoita mabasa emaoko. Vakadzi vevanhu kwete, anoda nezvangu ngaandibate pa0712 763 283. Ndogara muHarare.
Ndinotsvagawo shamwarisikana ine makore 18 kusvika 26. Ndiri mukomana ane makore 27, nhamba dzangu 0779 327 483.
Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagwo mukadzi ane 30 – 35. Anoda ngaandibate pa0777 645 443.
Makadii? Ndiri murume ane makore 28, ndotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Ndogara kuChitungwiza, nhamba dzangu 0776 082 127. Ndatenda hangu.
Ndatambura nekuda murume anoda kuroora, ndine vana 3 uye ndiri HIV negative. Ndinoda ane makore 28 ane vana vake aine makore 35 – 45. Ngaandibate pa0778 685 727.
Ndiri murume ane vana 2, ndotsvagawo mukadzi ari serious nekuda zvemba. Ndinozvishandira mabasa emawoko. Ndiri muHarare uye ndobatika pa0719 046 532.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume mushava munaku ane makore 40. Ndinotsvagawo mukadzi mukobvu ane rudo asiri pamushonga. Handishande, afarira zvandiri ndibate chero nguva pa0773 278 946.
Ndiri murume ane makore 47,ndinotsvagawo mukadzi wekuroora anotya Mwari uye asiri pamushonga. Ndine vana 4, nhare yangu 0778 829 076.
Ini ndinonzi Nyarai, ndine makore 25 nemwana mumwechete uye ndiri kutsvagawo mukomana anoroora ane mwana mumwe. Ngaave akavimbika ane makore 32 kusvika 36. Nhamba dzangu 0778 410 726, ndinobva kwaMutare.
Makadii? Ndiri kutsvagawo musikana akanaka wekushamwaridzana naye ane makore 18 – 25. Ndine makore 22 uye ndogara kuNorton. Vanoda ndibatei pa0777 136 355 tigotaura.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, kumusha ndekwaRusape uye ndoshandira muHarare. Ndotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 20 asina mwana ava kuda musha. Ndobatika pa0714 248 355.
Ndiri mukomana ane makore 33, handisi pamushonga uye ndodawo musikana anoda zvemba. Nhamba dzangu 0771 557 685.
Ndiri murume ane makore 34, ndinodawo mukadzi ari pachokwadi asiri pamushonga. Ndinoda anogara pedyo neMutare, nhamba dzangu 0783 543 840.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 nevana 2. Ndotsvagawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi ane makore 30 – 37 ane mwana 1 kana 2. Ndobatika pa0775 797 013.
Ndiri mukadzi ane makore 23, ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 25 kusvika 30. Anoda ngaandibate pa0771 500 667.
Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane mwana 1. Ngaave mutsvuku, munaku ane makore 18 – 25. Matsotsi kwete musafona, ndoda ari pachokwadi andibate pa0788 950 288.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye imba. Nhamba yangu 0776 596 088.
Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuroorwa ane makore 18 – 33 asina mwana. Ngaave anoshanda muHurumende, nhare yangu 0773 131 625.
Ndotsvaga mukadzi ane makore 35 zvichidzika anoshanda, ane mwana mumwechete ari pamushonga uye anoda kuroorwa. Ngaandibate pa0772 844 669.
Makadini? Ndiri murume ane makore 39, ndoda mukadzi akavimbika wekuroora asi ngave wekuBuhera kana Wedza. Nhamba dzangu idzo 0788 012 926.
Ndiri mukomana ane makore 29, ndotsvagawo musikana ave kuda kuroorwa ane makore 18 kusvika 26 asina chirwere. Andida ngaandibate pa0712 043 876.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinokutendai nechirongwa chenyu, ndiri kutsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40. Ini ndine 34, ndinoda ari HIV positive wekufambidzana naye anoziva zvaanoita. Ndanzwa nekunyorera asi tsamba yangu haisati yaburitswawo. Nhamba dzenhare 0719 753 761.
Ndinotenda nechirongwa. Handisati ndamuwana, ndiri murume ane makore 33 nemwana 1 uye ndiri HIV negative. Handishande, ndoda musikana ane makore 19 – 26 asina mwana. Ngaave asingashande anoda imba, vanobvunza-bvunza zvakawanda imbomirai. Nhare yangu 0718 325 457.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 37, ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Zvakawanda tozotaura, nhare yangu 0778 199 001.
Ndodawo mukadzi ari serious wekuroora ane makore 18 kusvika 30 ane vana vaviri kana asina. Ini ndine makore 37, anoda anondibata pa0788 549 798.
Kwayedza makadii? Ndiri mukoma wemakore 21, ndotsvagawo musikana anoda zveimba ane makore 18 kusvika 20. Asi asiri pamushonga ngaandibate panhamba idzi 0774 703 378.
Makadii veKwayedza? Ndakazowana murume wandaida, vaifona panhamba idzi 0777 989 201 chiregai.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 31 nemwana 1, ndotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35 kusvika 40 anogara muHarare. Ari HIV negative ngaandibate pa0788 151 203.
Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndinotsvakawo murume chero wezera ripi zvaro ari pachokwadi. Anoda zvekuroora, ndinobatika pa0776 619 472.
Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvakawo wekuroora ane makore 20 – 30 ari pamushonga. Ane mwana 1 kana asina anoda ngaandibate pa0776 443 608.
Makadii mose? Ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana mumwe anoda zvemba uye ari pachokwadi. Kufona kana matxt ndopindura zvese, nhamba dzangu 0779 861 886.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 39, ndiri HIV positive uye ndodawo murume anoda wanano. Anoda ngaandibate pa0771 325 024.
Ndiri murume ane makore 38 nevana vatatu uye ndoda mudzimai ane makore 30 kusvika 35 kwete ari pamushonga. Nhamba yangu 0779 561 322.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana wemakore 28, ndinotsvagawo musikana wekuroorana naye ane makore 20 kusvika 26. Andifarira ndibate pa0774 432 150.
Ndiri mukomana ane makore 40, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 45 zvichidzika asi ngaave mukobvu. Ane rudo ngaandibate pa0787 531 399.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 24 ane mwana 1 kana asina. Ini ndine mwana 1 uye handisi pamushonga. Ndatenda nhare yangu 0776 547 349.
Ndotsvagawo mukadzi wekuroora mukobvu, munaku anetsika uye ane makore 18 kusvika 45. Ngaandibate pa0779 040 051.
Makaita basa vabiki vechirongwa, vaifona panhamba idzi 0772 605 382 chiregai zvenyu mose zvakaita.
Ndiri kutsvagawo mudzimai akanaka ane mwana, anoda zvemba uye anokwanisa kuchengetawo mwana wangu. Ngaave nemakore 22 – 30. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0784 512 107.